Unlimited Facebook | Telenor Myanmar
Unlimited Facebook Night ပက်ကေ့ခ်ျ
ည ၁၁နာရီမှ နံနက်၇နာရီအတွင်း အကန့်အသတ်မရှိ Facebook (application, website နှင့် Messenger) တွေကို တ၀ကြီး ဘေလ်ထပ်မကုန်ဘဲ
၉၉ ကျပ် တည်းနဲ့ ၀ယ်ယူပြီး ရက် ၉၀ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိတယ်လီနောဆင်းကဒ် အသုံးပြုနေေသာသူများမှာ
USSD သို့မဟုတ် MyTelenor အပလီကေးရှင်း မှ ပက်ကေ့ချ်ကို ၀ယ်ယူရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
ဆင်းကဒ်အသစ်များတွင် ပထမအကြိမ်ငွေဖြည့်ပြီးပါက အကန့်အသတ်မဲ့ ည ၁၁ နာရီမှ မနက် ၇ နာရီ အတွင်း Facebook အသုံးပြုခြင်းကို ရက်၉၀ သုံးစွဲခွင့်အလိုအလျှာက်ရရှိမှာပါ။
4th June 20 မှစ၍တယ်လီနော ဆင်းကဒ်အသစ်သုံးစွဲသူများ
Unlimited Facebook Night ပက်ကေ့ချ်ကို ၉၉ကျပ် ဖြင့် MyTelenor App (သို့) *8099# ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး ပက်ကေ့ချ်ကို၀ယ်ယူနိုင်မှာပါ။
ပက်ကေ့ချ်သက်တမ်း ရက် ၃၀
Telenor Prepaid ဆင်းကဒ်အသုံးပြုသူများအားလုံး အစီအစဉ်ကိုရယူနိုင်ပါသည်။
ဆင်းကဒ်အသစ်များတွင် ပထမအကြိမ်ငွေဖြည့်ပြီးပါက အကန့်အသတ်မဲ့ Facebook အသုံးပြုခြင်းကို ည ၁၁ နာရီမှ မနက် ၇ နာရီ ရက်၉၀ သုံးစွဲခွင့် ရရှိမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ပက်ကေ့ချ်တန်ဖိုး ၉၉ကျပ်ပေးဆောင်ရန်မလိုပါ။ လက်ရှိ Telenor Prepaid ဆင်းကဒ်အသုံးပြုသူများအားလုံးသည် ပက်ကေ့ချ်ကို ၀ယ်ယူခွင့်ရှိပါသည်။
ပက်ကေ့ချ်စျေးနူန်းမှာ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ပါဝင်ပြီး ၉၉ ကျပ် ကျသင့်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ပက်ကေ့ချ်အသုံးပြုနိုင်သော သက်တမ်းကာလမှာ ရက် (၃၀) ဖြစ်ပါသည်။
အကန့်အသတ်မဲ့ Facebook အသုံးပြုခြင်းကို ည ၁၁ နာရီမှ မနက် ၇ နာရီအတွင်း အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ပက်ကေ့ချ် ရယူထားစဉ်အတွင်း တူညီသော ပက်ကေ့ချ်ကို ထပ်မံရယူ၍မရပါ။
‘Unlimited Facebook’ Night Pack အစီအစဉ်ကို ရယူပြီးသည်နှင့် Facebook Application ၊ Facebook Website နှင့် Facebook Messenger (Messenger အသုံးပြု၍ အသံနှင့် ဗွီဒီယို ခေါ်ဆိုမူများ မပါဝင်ပါ) များအား ည ၁၁ နာရီမှ မနက် ၇ နာရီအတွင်း အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Facebook မှ link တွေကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် ပြင်ပ website များကိုဆက်လက်အသုံးပြုလျှင် ဒေတာအသုံးပြုမှုအား ဝယ်ယူထားသော Data Package ထဲမှ သို့မဟုတ် PAY-GO-RATE ဖြင့်ပင်မ လက်ကျန်ငွေမှ ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
‘Unlimited Facebook’ Night Pack အစီအစဉ် ၏ သက်တမ်းလက်ကျန်ကို MyTelenor Application ရှိ Special Rate Menu သို့မဟုတ် USSD *979*3*8# ကို နှိပ်ပြီး လွယ်ကူစွာစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
တယ်လီနောမှ ‘Unlimited Facebook’ Night Pack နှင့် ပတ်သက်သည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား တည်ဆဲ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် အညီ အချိန်မရွေး ပြောင်းလဲ ပြင်ဆင်နိုင်ပြီး ပြင်ဆင်သည်နှင့် တပြိုက်နက် အကျိုးသက်ရောက်မည် ဖြစ်သည်။
အကန့်အသတ်မရှိ Facebook ညစဉ် သုံးပက်ကေ့ခ်ျဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း?
ည ၁၁နာရီမှ နံနက်၇နာရီအတွင်း အကန့်အသတ်မရှိ Facebook app, website နှင့် Messengerများကိုဘေလ်ကုန်မှာ စိတ်မပူရပဲ အကန့်အသတ်မရှိ ရက်၃၀ အတွင်း အသုံးပြုနိင်မည့် ပက်ကေ့ခ်ျဖြစ်ပါသည်။ ပက်ကေ့ခ်ျ အသေးစိတ်မှာ-
စျေးနှုန်း : ၉၉ကျပ် (၀င်ငွေခွန်၅% နှုန်းပါပြီး)
အချိန် : ည ၁၁နာရီမှ နံနက် ၇နာရီအတွင်း Facebook app, website နှင့် Messengerသုံးစွဲခြင်း (Messenger အသုံးပြု၍ အသံနှင့် ဗွီဒီယို ခေါ်ဆိုမူများ မပါဝင်ပါ)
၀ယ်ယူရန် : *8099# ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး (သို့မဟုတ်) MyTelenor app မှတဆင့်လည်း၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။
Telenor Prepaid ဆမ်းကဒ်အသစ်၀ယ်ယူပါကပက်ကေ့ခ်ျ ကိုရရှိမှာပါသလား?
ဆင်းကဒ်အသစ်တွင် ပထမအကြိမ်ငွေဖြည့်ပြီးပါ အလိုအလျောက်ရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။ ပက်ကေ့ခ်ျ အတွက် ၉၉ကျပ်ပေးဆောင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ သက်တမ်း ရက်၉၀ အသုံးပြုနိင်ပြီး သက်တမ်းကုန်သွားပါက၉၉ကျပ်ဖြင့် ပြန်လည်၀ယ်ယူနိုင်ပါမည်။
ညအချိန် ဆိုတာ ဘာလဲ?
ပက်ကေ့ခ်ျ၀ယ်ယူထားပါက ပက်ကေ့ခ်ျသက်တမ်း အတွင်း ည ၁၁နာရီမှ မနက်၇နာရီအတွင်း Facebook app, website နှင့် Messengerများကို တ၀ကြီး ဘေလ်ထပ်မကုန်ဘဲအသုံးပြုနိင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ Messenger အသုံးပြု၍ အသံနှင့် ဗွီဒီယို ခေါ်ဆိုမူများ မပါဝင်ပါ။
တကြိမ်မက အကန့်အသတ်မရှိ Facebook ညစဥ်သုံးပက်ကေ့ခ်ျကို ၀ယ်ယူနိုင်ပါသလား?
တကြိမ်၀ယ်ပြီးလျှင် ရက် ၃၀အတွင်း ထပ်မံ၀ယ်ယူ၍မရနိုင်ပါ။ သက်တမ်းကုန်သွားပါက၉၉ကျပ်ဖြင့် ပြန်လည်၀ယ်ယူနိုင်ပါမည်။
Messenger အသုံးပြု၍ အသံနှင့် ဗွီဒီယို ခေါ်ဆိုမူများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသလား?
ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ပက်ကေ့ခ်ျမှ အကန့်အသတ်မရှိ Facebook အသုံးပြမှုတွင် Messenger အသုံးပြု၍ အသံနှင့် ဗွီဒီယို ခေါ်ဆိုမူများ မပါဝင်ပါသဖြင့် အသုံးပြုမှုကျသင့်ပမာဏကို Data Package ထဲမှ သို့မဟုတ် PAY-GO-RATE ဖြင့်ပင်မ လက်ကျန်ငွေမှ ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Unlimited Facebook’ Night Pack အစီအစဉ် ၏ သက်တမ်းလက်ကျန်ကို ဘယ်လိုစစ်ရမလဲ?
သက်တမ်းလက်ကျန်ကို MyTelenor Application ရှိ Special Rate Menu သို့မဟုတ် USSD *979*3*8# ကို နှိပ်ပြီး လွယ်ကူစွာစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
Unlimited Facebook Night Pack ကို သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်အတွင်း Facebook ဒေတာအသုံးပြုမှုသည် အခြားဒေတာပတ်ကေ့ချ်(သို့) လက်ကျန်ငွေမှ နုတ်ယူသလဲ။
အသုံးစွဲသူသည် Unlimited Facebook Night Pack ကို ဆင်းကဒ်၂ခုဖြင့် ဒေတာကိုအသုံးပြုနေခြင်း (သို့မဟုတ်) အသုံးပြုနေစဉ် WiFi မှ မိုဘိုင်းဒေတာသို့ပြောင်းလဲအသုံးပြုစဉ် အချို့သော ဒေတာသုံးစွဲမှုများသည် အခြားဒေတာပတ်ကေ့ချ် (သို့) လက်ကျန်ငွေမှ ကောက်ခံခြင်းရှိနိုင်ပါမည်။